Fedora 11 (Leonidas) — MYSTERY ZILLION
မူလ › Linux/Unix › Fedora
May 2009 edited May 2009 in Fedora
Fedora 11 ကထွက်တော့မယ် (final release) ၁၄ ရက်လောက်ပဲလိုတော့တယ်လေ ..
ခု Alpha Release Notes အရ ဘာ features တွေအသစ်ပါလာလဲဆိုတော့ ..
- Windows Cross Compiler (Mingw32)
Windows အတွက် development လုပ်တဲ့ဟာတွေအတွက်ဆိုရင် Fedora မှာပဲနေပြီး လုပ်နိုင်ပါပြီ ..
- Ext4 File System (as default)
Gnome fun တွေအတွက်
KDE fun တွေအတွက်
- NetBeans 6.5 (update of 6.1)
- Pyton 2.6
- X server restart ( Ctrl + Alt + Backspace )
- Git 1.6.1.1 (updated)
Git ကတော့ software developers တွေသိကြမှာပါ .. Linus Torvalds ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ version control system တစ်ခုပါ .. အဲဒါကို Linux Kernel Development နဲ့ တချို့ software development တွေမှာ သုံးပါတယ် ..
good! i might give itatry, some site says, for Input Method, it will be iBus, Instead of SCIM
ကို boxo2 ခင်ဗျာ..ထွက်ရင် members တွေသုံးလို့ရအော်နောက်ထပ် web storage တစ်ခုမှာတင်ပေးပါနော်
yes, good idea. I think so, I would try ibus if I had remembered about it next time.
ကို bluerays, Fedora 10 iso ကို web storage တစ်ခုမှာတင်ပေးဖို့ပြောတာလား? အဲဒါဆိုရင် မလိုအပ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ် ..
Fedora ကို download လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် public mirrors တွေ torrents တွေ အများပေးထားပါတယ် .. Fedora မှမဟုတ် တခြား Linux distros တွေလဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ သက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာ public mirrors ကနေ အလွယ်တကူ download ယူလို့ရပါတယ် ..
အကယ်၍ တင်ပေးရမယ်ဆိုလဲ ပြောပါ .. ကို bluerays ကြိုက်နှစ်သက်ရာ web storage မှာ တင်ပေးမယ်လေ ..